गन्धर्वलाई ‘गाइने’ भनेर किन उपेक्षा गर्छाैं ?
मंगलबार असोज २८, २०७६/ Tuesday 10-15-19
गन्धर्व (आज हामीले मानिएका गाइने भन्ने गर्छाैं) को हुन् ? गन्धर्व देव गण मध्ये एउटा गण हो । गन्धर्वराजा पुष्पदन्तले इन्द्रको सभामा गाउँथे भनिन्छ । खासगरी गन्धर्वहरुको विवाह अप्सरासंग हुन्थ्यो । गन्धर्वहरुले मानिस र देवता बीचको सम्बन्ध कायम राख्न दूतको काम गर्थे ।गन्धर्ववेद चार उपवेद मध्ये एउटा वेद हो । अर्का तीन वेद आयुर्वेद, शिल्पवेद र धनुर्वेद पर्दछन् । गन्धर्ववेद अन्तर्गत संगीत, शास्त्रीय संगीत, राग, सुर, गायन, बाध्ययन्त्र पर्दछन् ।
भारतामा संगीत क्षेत्रलाई बिकास गर्न पहिलोपटक सन् १९०१ मा “गान्धर्व संगीत महाविद्यालय“ विष्णु दिगम्बर पालुस्कारद्वारा स्थापना गरियो । अर्को कृष्णराव शंकर पण्डितद्वारा सन १९१४ मा “शंकर गान्धर्व महाविद्यालय“ स्थापना गरियो ।
कुमार गन्धर्व नामले चिनिएका शिवपुत्र सिद्धराम कोमकालिलाई सन् १९७७ मा भारत सरकारद्वारा कलाक्षेत्रमा “पद्म भूषण“ ले सम्मानित गरियो । पछि यिनै कुमार गन्धर्वको स्मृतिमा राष्ट्रिय अन्तर्रा्ष्ट्रियस्तरका उत्कृष्ट युवा प्रतिभालाई सम्मान गर्न सन् १९९२/९३ बाट वार्षिक राष्ट्रिय सम्मान पुरस्कार स्थापित गरियो ।
पहिलो राष्ट्रिय गन्धर्व सम्मान पुरस्कार सन १९९२/९३ मा अजय चक्रवर्तिले पाए भने सन २०१८ को पुरस्कार नीलान्द्रि कुमारलाई प्रधान गरियो । पुरस्कार रासी ५१ हजार रुपैयाँ र सम्मानपत्र रहेको छ । नेपालको ललित कला क्याम्पस पनि कला र संगीतलाई सम्बर्द्धन गर्ने उद्धेश्यले स्थापित भएको हो । तर नेपाली समाजमा गन्धर्वलाई “गाइने“ भनेर उपेक्षा गर्छाैं किन ? विचारमा परिवर्तन आउन जरुरी छ कि छैन ? विचारमा परिवर्तन आएको छैन भने परिवर्तन ल्याउन आवश्यक छ ।